बधाई ! नेपालमा आज थप ४०२२ जनाले कोरोनालाई जिते – Khabar Patrika Np
बधाई ! नेपालमा आज थप ४०२२ जनाले कोरोनालाई जिते
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २७, २०७८ समय: २३:०३:३४
काठमाडौं : नेपालमा आज थप ४०२२ जनाले को’रोनालाई जि’तेका छन । नेपालमा पछिलो २४ घन्टामा थप ८८५० जनालाई कोरो’ना पु’ष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रबक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार देशका बिभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परि’क्षणमा थप ८८५० जनालाई ‘कोरो’ना संब’क्रमण पु’ष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसी’आरबाट ८७७७ र एन्टी’जेनबाट ७३ जनामा सं’क्रमण पु’ष्टि भएको हो ।काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४१९८ जना संक्र’मित थपिएका छन् । यसमध्ये ३ हजार १६१ जना काठमाडौँ जिल्लामा, ललितपुरमा ५३३ र भक्तपुरमा ५०४ जना सं’क्र’मित भेटिएका हुन् ।
उता गण्डकी प्रदेशमा थप ३७९ जनामा को’रोना सं’क्रमण पु’ष्टि भएको छ । प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परी’क्षणमा पोखरामा २७२ सहित गण्डकीमा ३७९ जनामा सं’क्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डा.विनोदबि’न्दु शर्माले जान’कारी दिए ।
उनका अनुसार गोरखामा ६०, तनहुँमा ६६,बाग्लुङ २०, स्याङजा २०, लमजुङ ९, पर्वत ३, मुस्ताङ १,नवलपरासी पू’र्वमा १ र म्याग्दीमा १ गरी थप ३७९ जनामा को’रोना संक्र’मण देखिएको हो ।
योसँगै गण्डकी प्रदेशमा संक्र’मितको संख्या २२ हजार ९७९ पुगेको छ ।यसैबीच प्रदेशमा कोरो’ना संक्र’म’णबाट १२ जनाको मृ’त्यु भएको छ । एकैदिन यति धेरै संख्यामा मृ’ त्यु भएको प्रदेशमै पहिलो घ’ट्ना हो । गण्डकी प्रदेशमा को’रोना संक्र’म’णबाट मृ’ त्यु हुनेको संख्या २६३ पुगेको छ ।